Iwo mashanu makuru maitiro eakagadzirirwa-ecommerce saiti | ECommerce nhau
Iwo mashanu makuru maitiro eakagadzirirwa-ecommerce saiti
Pane zvinhu zvinoverengeka zvinokanganisa kubudirira kweiyo e-commerce saiti, asi zvinosuwisa, kuratidza idzo nzvimbo dzesimba uye kushaya simba hazviwanzo kuva zvakananga. Mune ino chaiyo kesi, isu tichataura newe nezve hunhu hukuru hweyakanaka yakagadzirirwa saiti yeEcommerce.
1 1. Kurerukirwa kwekufamba
2 2. Dhizaini haina kumira pamusoro pezvigadzirwa
3 3. Nyore kutenga nzira
4 4. Ratidza zvigadzirwa zvinonyanya kufarirwa
5 5. Yakatsanangurwa chigadzirwa mapikicha
1. Kurerukirwa kwekufamba
Kana zvasvika pakutengesa zvigadzirwa, chinodiwa chekutanga kuchitoro cheEcommerce ndechekuti mutengi anofanirwa kukasira uye kunyatso tsvaga izvo zvaari kutsvaga. Kufambisa zvine mutsindo kwakakosha kune ecommerce saiti sevashanyi vasingakwanise kuwana zvavari kutsvaga zvinoguma nekutengesa kwakarasika.
2. Dhizaini haina kumira pamusoro pezvigadzirwa
Mune bhizinesi reEcommerce, kutarisisa kunofanirwa kugara kuri pane zvigadzirwa zviripo zvekutenga. Dhizaini isinganzwisisike yekuwedzeredza kazhinji inokuvadza kupfuura kunaka, nekuti pakupedzisira, dhizaini haisi iyo inotengeswa, asi zvigadzirwa.
3. Nyore kutenga nzira
Chiitiko chemushandisi pane e-commerce saiti chakakosha pakubudirira. Ndokunge, kana nzira yekutarisa inosanganisira matanho akawandisa kana kutovhiringidza, vatengi vanozopedzisira vasiya ngoro yavo yekutenga. Naizvozvo, Checkout inofanira kugara ichisanganisira mashoma masitepisi uye inofanirwa kuve nyore uye inonzwisisika kune vatengi.
4. Ratidza zvigadzirwa zvinonyanya kufarirwa
Mabhizinesi mazhinji ecommerce anoedza kuratidza zvinhu izvo zvinogona kuve zvinonakidza kune vangango vatenga. Huwandu hukuru hwee-commerce saiti irikushandisa nzvimbo dzakapamhamha pane peji reimba kusimudzira kutengesa kwazvino, kugadzirwa kwechigadzirwa chitsva kana chero chii icho chinopa kufarira.
5. Yakatsanangurwa chigadzirwa mapikicha
Kutengesa zvigadzirwa paInternet kwakasiyana nekutengesa muchitoro chaicho nekuti mutengi haakwanise kubata kana kuona chigadzirwa mumunhu asati aita sarudzo yekutenga. Nekupa mapikicha ezvigadzirwa ayo anojekesa zvakadzama hunhu hwakafanana, kusagadzikana uku kunokundwa uye zvinova nyore kumutengi kusarudza kana kwete kutenga chigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Iwo mashanu makuru maitiro eakagadzirirwa-ecommerce saiti
Yekupedzisira Yemagariro Deux, plugin yekugovana zvemukati pasocial network
ReferralCandy; chishandiso chekukwezva vatengi nyowani kuEcommerce yako